Mila akora azo antoka, efa nampiasaina sy nahomby ary tsy maharotika amin'ny vatan'olombelona, fantatra sy hananana porofo voarakitra an-tsoratra fa tsy henoheno fotsiny fa misy porofo siantifika ary fotoana ela be no nananana azy. Ny fananana tahirin-javamaniry betsaka azo ampiasaina sy haparitaka eran'i Madagasikara. Ny fananana orinasa mpikaroka sy mpamokatra manana ny fenitra ara-teknika sy ara-barotra momba ny momba ny fanafody. Ny CVO dia natao iarovana amn'ny Covid-19 ka ilay fatra somary ambanimbany no ampiasaina. Manosika ny hery fiarovam-batana ary manila ny rofy entin'ny Covid-19 toy ny kohaka ny dorehitry ny taova fisefoana izy amin'izay. Ilay fomba fiasa manasitrana kosa indray dia ny any amin'ny hopitaly ihany ary efa mahafantatra izany ireo mpitsabo ny mararin'ny Covid-19. Fatra ambonimbony no ampiasaina. Raha vao manana rofy mitovitovy amin'ny aretina azo avy amin'ny Covid-19 dia mety ny misotro ny CVO amin'ny fatra kely toy ny aretina miteraka korotam-pisefoana, aretina mety hanimba nentina hiarovana ny fiasan'ny taova toy ny avokavoka sy ny voa. Nambarany, fa afak’omaly no namoahan'ny Agence des Medicaments ny anaran'ny CVO ka manomboka izao dia raokandro na tambavy natsaraina na ''Rémède Traditionnel Amelioré'' ny CVO. Azo atao amin'izay ny miantso azy ho fanafody, hoy ny Profesora Rafatro Herintsoa.